अब हजारको नेपाली नोटमा यस्तो चित्र आउदैँछ, थाहा पाईराख्नुहोस् है ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/अब हजारको नेपाली नोटमा यस्तो चित्र आउदैँछ, थाहा पाईराख्नुहोस् है !
अब हजारको नोटमा दुईवटा हात्ती भएको चित्र राखिने भएको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको हजारको नोटमा समावेश गरिएको हात्ती अफ्रिकी मुलको रहेको पत्ता लागेपछि राष्ट्र बैंकको डिजाइन कमिटीले नोटमा नेपालकै जुम्ल्याह हात्तीको चित्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
’अहिले हजारको नोटमा एउटा हात्तीको तस्बिर देखिन्छ । अब त्यहि ठाउँमा नेपाली हात्तीको तस्बिर राखिने निर्णय भएको हो,’ नोट डिजाइनर सुन्दर श्रेष्ठले हजारको नोट देखाउँदै भने । जुम्ल्याह हात्तीको चित्र समावेश हजारको नोट ४ महिनाभित्र छापिएर आउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
६र७ वर्षदेखि नोटमा जनावरहरु फेरिएका छन् । पाँचको नोटमा दुईवटा याक समावेश थिए । अहिले एउटा मात्र याक छ । पाँच सयको नोटमा दुईवटा बाघ थिए, अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटामात्र बाघ राखिएको छ । सयको नोटमा पहिले एउटा गैंडाको तस्बिर भएकोमा अहिले यसमा माउ र बच्चा गैंडाको फोटो छ। अब हजारको नोटमा पनि जुम्ल्याह हात्ती देखिने भएको हो ।
वास्तवमा मानिस जति धनी बन्दै गयो उति नै उसलाई अझ बढी धनी बन्ने इच्छा जागेर आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन विश्वभर नै धनी र गरीबबीच एउटा अचम्म किसीमको दूरी छ । मानिसहरु गरिब भएकै कारण आफूलाई अभागी र असफल ठान्छन् । तर, वास्तवमा त्यसो होइन । भगवान गौतम बुद्धले एक ब्यक्तिको ‘म कसरी गरीब भएँ’ भन्ने प्रश्नमा दिएको उत्तरले तपाईंलाई लाग्नेछ कि वास्तवमै हामी कति धनी रहेछौँ र तपाईंको गरीबी एकै छिनमा हटेर जानेछ ।
त्यसैले हरेकले पैसा कमाउने जुक्ति खोजिरहका हुन्छन । यहाँ हामीले केही तथ्य उल्लेख गरेका छौं । जुन फलो गर्नु भयो भने पैसा कमाउन सहज हुनेछ । यस्ता छन् पैसा कमाउने तरिकास्
महत्वकांक्षी बन्नुहोस र सपना देख्नुहोस:
क्षमताको पहिचान गर्नुहोस:
कडा परिश्रम गर्नुहोस:
कुनै काम सुरु गर्नुहोस:
वर्षै्पिच्छे तलब बढ्ला भनेर आश गर्नुभयो भने तपाईं कहिल्यै धनी हुन सक्नुहुन्न । त्यसैले राम्रो तलब दिने जागिरको खोजी गर्दै अफिस छिटोछिटो बदल्नुस ।
बाक्लो हिऊले ढाक्यो धनकुटाको सडक, अवरु’द्ध सडक खुलाउन सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई खटाईयो